10-ka Shaqo ee ugu Fiican ee Maalgelinta Hantida Ma-guurtada ah (REITS) -
Bogga ugu weyn 10-ka Shaqo ee ugu Fiican ee Maalgelinta Hantida Ma-guurtada ah (REITS)
10-ka Shaqo ee ugu Fiican ee Maalgelinta Hantida Ma-guurtada ah (REITS)
Qaybta maalgashiga guryaha, waxaa jira fursado shaqo oo badan. REITs waxay siisaa fursado badan oo dad badan. Dadku waxay si isa soo taraysa uga fekerayaan inay maalgashadaan hantida ma-guurtada ah, taas oo ah qayb hantiyeed oo cusub oo soo jiidasho leh.
Marka ay timaado qorsheynta maaliyadeed, awoodda lagu maalgeliyo socodka lacagta caddaanka ah ee dheeraadka ah waa muhiim. Markaa, iyada oo taas la sheegayo waa kuwan tobanka shaqo ee ugu mushaharka badan ee hanti-dhawrka maalgashiga.
Waa maxay Trust Estate Investment Trust, sideese u shaqeysaa?
Noocyada kala duwan ee Maalgelinta Hantida Guryaha
Maalgelinta Guryaha Ma-guurtada ah ee deynta
Kalsoonida Maalgelinta Hantida Maguurtada ah ee Sinaanta
Kalsoonida Maalgelinta Hantida Real Estate Medical
Shirkadda Merchandise Real Estate Investment Trust
Faa'iidooyinka Ka Shaqaynta REIT
Shaqooyinka Lacag-bixinta ugu Fiican ee Hanti-dhowrka Maalgelinta Guryaha
Falanqeeyaha dhabta ah
Qiimaynta Hantida Ma-guurtada ah
Soo-saare Real Estate
Ka shaqaynta Hantida Maalgelinta Hantida Ma-guurtada ah ma tahay fikrad wanaagsan?
Sida Shaqo Loogu Helo Hantida Maalgelinta Hantida Maguurtada ah
FAQs ku saabsan 10ka Shaqo ee ugu Fiican ee ugu Wanaagsan ee Maalgelinta Guryaha (REITS)
Waa maxay qeexida hantida ma-guurtada ah ee ganacsiga?
Waa maxay shuruudaha lagu noqonayo maalgeliyaha guryaha?
Miyaan maalgeliyaa hantida ma-guurtada ah ama REITs?
Xirfadda Maalgelinta Hantida Ma-guurtada ah ma tahay doorasho wanaagsan?
Waa maxay shaqada ugu fiican ee ugu mushaharka badan aaminaadaha maalgashiga guryaha?
REITs, ama aaminaadyada maalgashiga hantida ma-guurtada ah, waa shirkado leh oo maamula hantida ma-guurtada ah. Goobaha ganacsiga, hoteelada, dhismayaasha xafiisyada, bakhaarada, iyo kaymaha ganacsiga ayaa ka mid ah hantida ma-guurtada ah ee ay maamulaan.
REITs waxay leedahay hanti qiimaheedu dhan yahay $3.5 trillion gudaha Maraykanka. Ganacsiyadani waxay dakhli ka soo galaan guryaha hantida maguurtada ah, taasoo ay tahay inay u gudbiyaan maalgashadayaasha.
Hantidhowrka maalgashiga hantida maguurtada ah (REITs) ayaa mararka qaarkood loo isticmaalaa in lagu maalgeliyo hantida ma-guurtada ah. Kalsoonida maalgashiga hantida maguurtada ah (REITs) waxay la mid tahay kaydka taas oo u oggolaanaysa maalgashadayaasha inay huwiyaan hanti qiimo leh oo ay helaan dakhli la wadaago oo la saadaalin karo.
Tani waa sababta ay dad badani u arkaan hantida ma-guurtada ah inay tahay hab weyn oo lagu kala duwanaan karo dakhligooda dakhli ee aan tooska ahayn. Dadka waxaa loo jiiday hanti ma-guurto ah sababtoo ah badeecooyinkan iyo suurtagalnimada soo-noqosho la taaban karo.
U fiirso noocyadan kala duwan ee REITs ee laga yaabo inaad maal gashato marka aad wax badan ka barato maalgashiga hantida ma-guurtada ah. Ururinta kirada, iibinta macaamiisha la deggan yahay, iyo amaahda guryaha waa dhammaan dariiqooyin ay lacag ku sameeyaan.
REITs-ku-jeedka deynta waa shirkado lacag amaahiya dadka raba inay iibsadaan hanti ma-guurto ah. Tani waxay la mid tahay shirkadaha wax amaahinta ee iibsadaha la siiyo deyn si uu u bixiyo dulsaarka deynta.
Qiimaha dulsaarka bilaha ah ee deynta ayaa soo saara qaabkan dakhliga maalgashiga. Khasaaraha kaliya ee maalgashigani waa khatarta ah in la khiyaaneeyo. Iibsadayaal badan ayaa dib u dhigaya lacag bixinta ama si fudud ayay u socdaan iyaga oo aan wax ribo ah bixin.
Guryaha, hantida ma-guurtada ah ee la dego, bakhaarada, suuqyada, iyo meelaha lagu nasto ayaa ka mid ah warshadaha ay Equitability REITs maalgashadaan. Kalsoonida maalgashiga hantida ma-guurtada ah ayaa mas'uul ka ah samaynta, la socodka, iyo dhisidda xudunta marka qorshaha la ogolaado.
REITs ayaa markaas bixin doonta boqolkiiba faa'iidada maalgashadayaasha. Dakhliga ka soo baxa maalgashiga guud ahaan waxa loola dhaqmaa sida dakhliga REITs oo dhan waxaana loo qaybsadaa si waafaqsan heshiiska.
Medical REITs waxay ku hawlan yihiin kilinigyo gaar ah oo badan, xarumo cilmi baaris, iyo dhismayaal daryeel caafimaad, iyo waxyaabo kale. Sababtoo ah hadda waxay u baahan yihiin baahi badan, way adagtahay in la qiyaaso in tani ay fashilantay.
Baahida isbitaallada ayaa kor u kacaya. Shaybaadhka, baadhista gaarka ah, iyo xarumaha kalkaalinta dhamaantood waxay leeyihiin shuruudo u gaar ah. Markaa, waa ammaan in la qiyaaso in maalgashiga goobta caafimaadka uu soo celin doono oo uu ka caawin doono shirkaddaada inay koraan.
Dukaamada tafaariiqda iyo suuqyada, sida dukaamada waaweyn, suuqyada wax laga iibsado, suuqyada waaweyn, iyo meelaha kale, ayaa tusaale u ah maalgashiga badeecadaha.
REITs, dhanka kale, ma masuul ka noqon doonto maaraynta ama soo saarista kuwan. Taa beddelkeeda, waxay u qoondeeyaan iibsadayaasha deyn waxayna ka soo ururiyaan dakhliga dukaamada tafaariiqda iyo milkiilayaasha suuqa.
REIT waxay ku bilaabi doontaa inay dhisto guryo dabaqyo ah, guryo la deggan yahay, dhismayaal bulsho oo waaweyn, iyo tas-hiilaadyo kale. Kuwani waa dhowr ka mid ah hawlaha ugu waaweyn ee REITs marka laga hadlayo REITs gudaha.
XIDHIIDHKA: Waa maxay Lacagaha Index? Tilmaamaha Buuxa ee Maalgelinta.
Shirkadaha dhulka iyo hantida, iyada oo aan loo eegin goob kasta oo aad doorato, ma saameyn doonto hoos u dhac dhaqaale. Waa doorasho shaqo oo cajiib ah sababtoo ah warshad kasta waxaa gacanta ku haya aaminaadyada maalgashiga hantida maguurtada ah.
Shaqada maareeyaha REIT waa mid ka duwan kuwa kale. Shaqooyinkan, dhanka kale, waxay la yimaadaan faa'iidooyin badan:
Waxaad u shaqeysaa sidii shaqaale qandaraas oo waxaad raacdaa xeerar kuu gaar ah iyo waxyaabaha aad door bidayso ee shirkaddaada. Wax lacag ah laguma siiyo bishii. Taa beddelkeeda, inta aad ku darsanayso faa'iido kasta iyo dakhli kasta ayaa go'aaminaya mushaharkaaga.
Tani maahan shaqadaada caadiga ah ee 9-ilaa-5 Kulamada iyo tamashlaha goobta waxa loo qorshayn karaa hadba sida aad doorbidayso.
Mid ka mid ah sifooyinka ugu soo jiidashada badan ee REITs ayaa u muuqda inuu yahay dakhligoodu sareeyo. REITs ayaa looga baahan yahay inay bixiyaan 90% dakhligooda la cashuuri karo ee saamilayda ah, markaa saami qaybsiga REIT inta badan aad ayay uga badan yihiin celceliska saamiga S&P 500.
Faa'iidada kale waa faylalka kala duwan. Dad yar ayaa awoodi kara inay iibsadaan unug ku jira horumarinta hantida maguurtada si ay u soo saaraan dakhli dheeraad ah; si kastaba ha ahaatee, REITs waxay u ogolaataa dadweynaha guud inay sidaas sameeyaan. Intaa waxaa dheer, iibsashada iyo iibinta hantida ma-guurtada ah waxay noqon kartaa waqti-qaadasho, xirida socodka lacagta caddaanka ah.
Maadaama aanu ka raadinayno shaqooyinka ugu mushaharka badan ee maalgashiga hantida ma-guurtada ah, noqoshada maalgeliyaha ayaa ku jira kaalinta kowaad. Tani waa mid ka mid ah xirfadaha ugu faa'iidada badan warshadaha. Shaqada maal-galiyaha hantida ma-guurtada ah waa inuu iibsado hantida ma-guurtada ah, ku darsado qiimo, ka dibna dib u iibiyo isagoo faa'iido leh.
Miyaanay u muuqan mid fudud oo faa'iido leh? In kasta oo tani ay tahay guul aad u weyn, haddana ma aha mid aan ka maarmin dhibaatooyinkeeda.
Si aad u hesho faa'iido hufan, waxaad u baahan tahay inaad ogaato goorta iyo meesha aad ka iibsanayso guryaha, iyo sidoo kale goorta iyo meesha laga iibinayo. Waxay ku tusinaysaa inaad diyaar u tahay inaad samayso cilmi-baadhis hufan oo suuqa ah mar kasta.
Haddii aad ka soo baxdo shuruudaha aasaasiga ah, waxaad diyaar u tahay inaad bilowdo meheraddaada maalgashiga hantida maguurtada ah. Dalka Maraykanka, magdhowga shaqadani waa ku dhawaad ​​$124,000.
Akhri: Fundrise ma xalaal baa mise waa khiyaano cusub oo hanti ma guurto ah? Eeg Dib -u -eegid Buuxda
Warshadaha maalgashiga hantida maguurtada ah, waa mid ka mid ah shaqooyinka ugu mushaharka badan ee aaminaadaha maalgashiga hantida ma-guurtada ah. Doorka wakiilka guryaha waa inuu dadka ka caawiyo wax iibsiga ama iibinta hantida ma-guurtada ah. Wakiilka hantida maguurtada ah shaqadiisu way kala duwan tahay waxayna ku xidhan tahay meesha uu ka shaqeeyo iyo waxa uu qabto. Waxa laga yaabaa inaad, tusaale ahaan, u shaqayso sidii wakiil si aad uga caawiso iibsadaha inay helaan guryo iyo iibiyeyaasha inay helaan iibsada. Waxa kale oo aad dooran kartaa inaad diirada saarto mid la dego ama hantida maguurtada ah ee ganacsiga.
Dillaaliinta guryaha la deggan yahay waxay caawiyaan iibsadayaasha iyo iibiyayaasha hantida ma-guurtada ah ee la deggan yahay inay ku xidhmaan.
Guryahaan waxaa ka mid ah guryo hal qoys ah, guryo raaxo leh, guryo is-kaashatada, guryaha fasaxa, iyo wixii la mid ah. Wakiilada hantida ma-guurtada ah ee warshaduhu waxay isku xidhaan iibiyeyaasha hantida ganacsiga iyo iibsadayaasha.
Qeybtaan waxaa ka mid ah xarumaha dukaameysiga, bakhaarrada, guryaha kirada ah, hoteello, iyo dhismayaal kale oo ganacsi. Sababtoo ah waa inaad khibrad u leedahay ganacsiga iyo maaliyadda, shuruuduhu way ka duwan yihiin halkan.
Tani waa xirfad kale oo si habsami leh ugu habboon liiskan shaqooyinka ugu mushaharka badan ee hay'adaha maalgashiga guryaha. Si aad u iibsatid, u iibiso, u suuq gasho, una maalgeliso hantida, falanqeeyaha REIT waxa uu la kaashadaa maamulka hantida ma-guurtada iyo maaliyadda.
Waxay ka caawiyaan shirkadda samaynta xukunnada hantida aqoonta leh iyagoo gacan ka geysta cilmi-baarista, falanqaynta, iyo la socodka isbeddellada suuqa hantida ma-guurtada ah.
Falanqeeye REIT ahaan, waxaa lagaa filayaa inaad sameyso tusaalooyin maaliyadeed guryaha shirkadda ee hadda ama wax iibsiga iyadoo la adeegsanayo habab maaliyadeed oo kala duwan. Natiijo ahaan, waa inaad si fiican u fahamtaa dhibaatooyinka maaliyadeed.
Mushaharka sannadlaha ah ee falanqeeyaha REIT wuxuu u muuqdaa inuu ku dhow yahay $82k.
Estate Real Qiimeeyaha Hantida
Qiimeeyuhu wuxuu u muuqdaa qof aqoon leh oo qiimeeya oo go'aamiya qiimaha hantida ma-guurtada ah. Guryahani waxay noqon karaan ganacsi iyo degaan labadaba.
Qiimeeyayaasha hantidu waxay isticmaalaan doorsoomayaal dhaqaale oo kala duwan si ay u go'aamiyaan qiimaha suuqa ee hantida ma-guurtada ah. Si aad u hesho booskan, waa inaad si qoto dheer u fahantaa sida uu u shaqeeyo suuqa hantida ma-guurtada ah, iyo sidoo kale sida arrimo kala duwan sida goobta u saameeyaan qiimaha hantida.
Si aad ugu shaqeyso qiimeeyaha hantida, waa inaad marka hore heshaa shatiga qiimeeyaha hantida. Tani waxay la macno tahay inaad is-diiwaangeliso oo aad dhammaystirto koorsada tababarka qiimaynta.
Aasaaska maaliyadda, aragtida dhaqaalaha, iyo maadooyinka kale ee khuseeya ayaa lama huraan u ah booskan. Qiimeeyayaashu waxay sameeyaan celcelis ahaan qiyaastii $53k sanadkii taasoo ka dhigaysa mid ka mid ah shaqooyinka ugu mushaharka badan ee maalgashiga hantida ma-guurtada ah.
XIDHIIDHKA: Waa maxay Backdoor Roth IRA iyo sidee buu u shaqeeyaa?
Akhri: Magaalooyinka Ugu Wanaagsan In La Maalgashado Hantida Ma Guurtada Ah 2022 | Aragtida Khubarada
Tani waa mid ka mid ah shaqooyinka ugu mushaarka badan ee ku jira aaminaadaha maalgashiga guryaha.
Qareennada hantida maguurtada ah waxay ka shaqeeyaan xallinta lahaanshaha hantida iyo arrimaha kala duwan ee wareejinta. Arrinka ku saabsan cinwaannada, is-beddelka, dukumeentiga, iyo dhibaatooyinka kale ee sharci ee la xiriira haysashada hantida ma-guurtada ah, qareenku wuxuu u shaqeeyaa dhexdhexaadiye ahaan.
Waxay sidoo kale siiyaan talo sharci iibsadaha iyo iibiyaha hanti ma-guurto ah. Tani waxay hubinaysaa in dhammaan dhinacyada ay raacaan nidaamka sharciga ee ku habboon ficillada, meeshana ka saaraysa tiro dhibaatooyin iman kara.
Magdhowga sanadlaha ah ee qareenka hantida ma-guurtada ah waa ku dhawaad ​​$119k, taasoo ka dhigaysa mid ka mid ah shaqooyinka ugu mushaarka badan REIT.
Waa mid ka mid ah shaqooyinka ugu mushaarka badan ee ku jira aaminaadaha maalgashiga hantida maguurtada ah
Doorka dallaaliyaha hantida ma-guurtada ah wuxuu la mid yahay kan wakiilka guryaha. Labaduba waxay u fududeeyaan iibiyayaasha iyo iibsadayaasha guryaha guryaha inay kulmaan. Farqiga ugu weyn ee u dhexeeya labada waa cidda ay u shaqeeyaan. Nuxur ahaan, inta badan dilaaliinta guryaha waxay u shaqeeyaan shirkadaha dullaalnimada.
Dallaalku, dhinaca kale, wuxuu ku dhaqmi karaa magaciisa ama iyada oo aan xubin ka ahayn shirkad dillaaleed. Dilaal ahaan, qof kasta si fudud ayuu u bilaabi karaa shirkad uu leeyahay oo dillaal ah. Labadan shaqo ee REIT waa kuwo la barbar dhigi karo ama si uun bay isugu xidhan yihiin.
Dallaaliyaha hantida ma-guurtada ah, tusaale ahaan, wuxuu u shaqayn karaa si madax-bannaan laakiin waa inuu marka hore leeyahay khibrad hal ilaa saddex sano ah wakiilka guryaha.
Dallaaliinta guryaha ee Mareykanka waxay kasbadaan qiyaastii $72.5k sanadkii celcelis ahaan taasoo ka dhigeysa mid ka mid ah shaqooyinka ugu mushaarka badan ee maalgashiga hantida ma-guurtada ah.
Akhri: Waa maxay Hantida Guryaha Dijital ah? Sideen lacagtayda ugu maalgelin karaa | 2022?
Dhammaan isdhexgalka dibadda u jeeda ee lala yeesho saamilayda REIT waxaa isku dubba ridey waaxda xiriirka maalgeliyayaasha.
Sida waafaqsan heerarka SEC, T sarkaalka xidhiidhka maalgaliyuhu wuxuu qabtaa shirka sannadlaha ah, oo ay ku jiraan warbixinta maaliyadeed iyo warbixinta kooban.
Kuwa ku takhasusay maaraynta maalgashiga heerka dhexe, shahaadada koowaad ee jaamacadda oo khibrad u leh xisaabaadka iyo maaliyadda ayaa had iyo jeer lama huraan u ah.
Dadku waxay ka qaybqaataan kaydka maalgashiga hantida maguurtada ah (REITs) oo waxay helayaan lacag-bixinno saami-qaybsi ah natiijada. Sababtoo ah REITs ayaa leh oo maamusha guryaha, boosaska maamulka hantida ayaa baahi weyn loogu qabaa suuqan.
Maareeyayaasha maalgashiga hantida maguurtada ah ayaa mas'uul ka ah hubinta in hantida 'xaaladaha maaliyadeed iyo jireed ay soo jiidanayaan. Lacagaha la siinayo saamilayda waa in lagu bixiyaa waqtigii loogu talagalay.
Intaa waxa dheer, ma aad ka qaybgeli doontid oo keliya baahiyaha milkiilayaasha, laakiin sidoo kale waxaad ka qayb qaadan doontaa baahiyaha guriga iyo kiraystayaasha. Kiraystayaasha quruxda badan ayaa kaa dhigaya shaqadaada mid fudud oo hubisa inaad fuliso yoolalka maaliyadeed ee maalgashadayaashaada.
Marka la eego mushaharka, maareeyayaasha guryaha ee Maraykanka waxay kasbadaan celcelis ahaan $54k sanadkii taas oo ka dhigaysa mid ka mid ah shaqooyinka ugu mushaharka badan kalsoonida maalgashiga guryaha.
Tani waa mid ka mid ah shaqooyinka ugu mushaarka badan ee ku jira aaminaadaha maalgashiga guryaha. Si ka duwan maalgeliyaha hantida ma-guurtada ah, ee iibsada oo iibiya hantida ma-guurtada ah ee jirta, horumariyahu wuxuu helaa dhul wuxuuna dhistaa hanti uu iibiyo.
Halkan waxa aad ka heli kartaa wax walba laga bilaabo guryo hal qoys ah ilaa dhismayaal ganacsi oo waaweyn sida bakhaarro iyo goobo laga dukaameysto. Laga bilaabo qorsheynta ilaa maalgelinta iyo isku dubaridka, horumarinta hantida ma-guurtada ah waxay qabtaan dhammaan habka horumarinta dhismaha.
Shakhsiyaadka u shaqeeya horumarinta hantida ma-guurtada ah waxay la shaqayn doonaan tiro xirfadlayaal ah si ay u hubiyaan hanaan aan toos ahayn. Qaybtaan waxaa ka mid ah injineerada, naqshadeeyayaasha, qareenada, qandaraaslayaasha, ganacsiyada kireynta, iyo xirfado kale.
Kafiil bixiyaha ugu weyn ee warshadaha guryaha waa Lataliye Kiraysi. Waxay dadka ka caawiyaan doorashada hantida iyo guryaha ee ku habboon miisaaniyadooda iyo danahooda.
U shaqaynta sidii lataliye kiraysi ahaan waa beddel cajiib ah haddii aad rabto inaad wax ka qabato aaminaadyada maalgashiga guryaha.
Haddii aad rabto inaad horumariso xirfadaada oo aad ka shaqeyso ilaa xirfadaha sida agaasimaha suuqgeynta, tani waa meel fiican oo aad ka bilowdo. Ku guuleysiga xirfaddan mustaqbalka waxay u baahan doontaa faham qoto dheer oo ku saabsan ganacsiga hantida maguurtada ah ee deegaanka.
Markaad wax badan ka ogaato arrintan, si dhakhso leh ayaad macaamiishaada u siin kartaa waxay u baahan yihiin.
Runtii waa mid ka mid ah shaqooyinka ugu mushaarka badan ee ku jira aaminaadaha maalgashiga hantida maguurtada ah.
Sidoo kale akhri Maalgelinta Hantida Guryaha ee 15 ee Bilowgayaasha 2022
Doorashada shaqada waa mid ka mid ah go'aamada ugu adag ee aan waligeen sameyn doono. Natiijo ahaan, waxaan waqti badan ku bixinaa falanqaynta faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka aag kasta si aan u dooranno wax gaar ah. Waxay u badan tahay inaad maqashay kalsoonida maalgashiga hantida maguurtada ah haddii aad shaqo raadinayso (REIT).
XIDHIIDHKA: Sida Loo Dhiso Jaranjarada CD -ga Sannadka 2022 | Tilmaan-Talaabo Talaabo Talaabo Fudud
Marka loo eego isbeddellada suuqgeyneed ee hadda jira, waa xirfad wax soo saar leh, oo leh fursado shaqo oo mushahar sare leh oo laga helo warshadaha sida horumarinta hantida iyo maaraynta, maaraynta hantida, iyo cilmi-baarista ganacsiga.
Hagahan waxa laga yaabaa inuu ku caawiyo haddii aanad caddayn fursadahaaga shaqo ee REIT oo aad u baahan doonto khabiir si uu kuugu dhex maro soo-gaadhista iyo fursadaha shaqo ee la heli karo. Sii wad akhrinta maqaalkan si aad wax uga ogaato adeegyada kala duwan ee REITs ay bixiso, iyo sidoo kale masuuliyadaha iyo takhasusyada loo baahan yahay.
Iyadoo warshaduhu ay khatar ku jiraan, dowladdu waxay dadaalkeeda diiradda saartaa dhaqdhaqaaq la'aanta. Maalgeliyaha ayaa u arka il dhaqaale oo la isku halayn karo oo balaayiin doolar ku maalgeliyay.
Waxaa jiri kara fursado shaqo oo dakhligoodu u dhigmo.
Si loo aasaaso loona joogteeyo REIT, hawlo kala duwan waa in la dhammeeyaa. Go'aanso nooca xirfadda aad xiisaynayso ama sida ugu habboon ugu habboon xirfaddaada. Go'aanso inaad leedahay khibrad waxbarasho ama shaqo oo lagama maarmaan ah, haddii kale, samee istaraatiijiyad aad ku heli lahayd.
Bilow codsashada REITs kala duwan. U muuji aqoontaada xagga maaliyadda, hantida ma guurtada ah, maamulka ganacsiga, iibinta, iyo maalgashiga. Xiriir la samee dadka goobta jooga. Baro intii aad awoodid oo ku saabsan doorarka badan ee REITs ay ku jiraan.
Ka bilow booska gelitaanka haddii aad ka maqan tahay shahaadadii lagama maarmaanka ahayd ama waayo-aragnimada. Ka faa'iidayso fursadaha si aad wax badan uga ogaato qaybta. Waxaad ka shaqayn kartaa xagga shaqadaada ugu habboon adigoo sidoo kale wax badan ka baran kara goobta.
Markaad wax badan ka ogaato qaybta, waxay u badan tahay inaad boos ka hesho oo aad ku guulaysato.
FAQs 10ka Shaqo ee ugu Fiican ee ugu Fiican Maalgelinta Hantida Ma-guurtada (REITS)
Hantida ma-guurtada ah ee ganacsigu waa hanti u adeegta goob ganacsi halkii ay ka ahaan lahayd guri. Aaggan waxaa loogu talagalay oo keliya dhaqdhaqaaqa la xiriira ganacsiga.
Kiraysiga kiradu waa isha dakhli. Xafiisyada, bakhaarada, hoteelada, maqaayadaha, tafaariiqda, iyo xarumaha daryeelka caafimaadka dhamaantood waxaa ka shaqeeya hanti ma-guurto ah oo ganacsi. Waxay noqon kartaa hal dhismo, suuq-xariif, ama xarun xafiis oo dhan.
Si aad u noqoto maalgeliyaha hantida ma-guurtada ah, waa inaad si fiican u fahantaa suuqa. Marka waaxdu horumarto, maalgashadayaasha wanaagsan waxay ku dadaalaan inay naftooda wax bartaan.
Markaad iibsanayso hantida shakhsi ahaan, waa inaad soo ururisaa dhaqaalaha lagama maarmaanka ah. Waxaad sidoo kale si gaar ah masuul uga tahay ilaalinta guriga iyo soo jiidashada kiraystaha. Milkiile guri ahaan, adiga ayaa kaligaa mas'uul ka ah khataraha la xiriira lahaanshaha.
Waxaad xubin ka noqonaysaa koox maalgashadayaal ah markaad ka qaybqaadato REIT. Kooxdu waxay wadaagtaa masuuliyadaha iyo khataraha la xidhiidha maalgashiga hantida ma-guurtada ah. Waxaad taas ku samayn kartaa adiga oo isticmaalaya codsiyada maalgashiga hantida ma-guurtada ah ama iibsashada saamiyada REIT si guud loo iibiyo oo ku taxan suuqa saamiyada waaweyn iyada oo loo marayo dullaal.
Ma waxaad raadinaysaa hab aad lacag ku samayso? Miyaad daneyneysaa ama aad taqaanaa suuqa hantida ma-guurtada ah? Ka dib ka shaqeynta kalsoonida maalgashiga hantida maguurtada ah (REITs) waxay noqon kartaa shaqadaada riyada. Waa muhiim inaad haysato lacag, ama aad ogaato deyn bixiye lagu kalsoon yahay si aad u bilowdo.
Waa inaad sidoo kale ku kalsoonaato awooddaada inaad fursad u qaadato. Had iyo jeer waxaa jirta khatar ah in hantidu lumin doonto qiimihiisu, iyadoo aan loo eegin inta khibradaada ah ee aad leedahay.
Xirfadda dilaaliinta hantida ma-guurtada ah waa mid ka mid ah shaqooyinka ugu faa'iidada badan uguna mushaharka badan warshadaha. Celcelis ahaan, dillaaliinta khibradda leh waxay guriga ku qaataan dakhli lix tiro ah.
REITs waa xirfad caalami ah oo guulaysata oo siisa shakhsiyaadka leh fursado shaqo oo waaweyn iyo fursad ay ku kasbadaan lacag tiro badan muddo gaaban gudaheed.
Natiijo ahaan, haddii aad rabto inaad si degdeg ah ugu gudubto goobtan, waxaad u baahan tahay inaad fursad ka qaadato mid ka mid ah shaqooyinka ugu mushaharka badan ee hantida maalgashiga hantida maguurtada ah ee liiska ku jira.
Magaalooyinka Ugu Wanaagsan In La Maalgashado Hantida Ma Guurtada Ah 2022 | Aragtida Khubarada
Chris Cuomo's Net Worth 2022 | Taariikh nololeedka, Dakhliga, Xirfadda, Baabuurta
Iyadoo cudurka faafa ee coronavirus uu wali burburinayo dhaqaalaha, suuqa saamiyada ayaa mar hore soo kabsaday. Waxaa qoray…
Miyaad ka welwelsan tahay oo ma ka welwelsan tahay mustaqbalka iyo xasilloonida dhaqaale ee carruurtaada? Oo waxaad ahayd…
Waa maxay Securities in Maaliyadda? Dulmar Iyo Sida Ay U Shaqeyso